Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones 2.1.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.2 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones
Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
, အပြောင်းအလဲအနှီးအားလုံးကိုသင့်ကလေး၏သို့မဟုတ်ကလေးငယ်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များ log နှင့် Glow ကလေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိုခြေရာခံရန်နို့ကနေ။ သင်တစ်ဦးနှီးမှတ်တမ်းချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးသူနာပြု timer နေရာမှာသို့မဟုတ်ပင်နို့တိုက် tracker တွင်သင်သည်သင်၏မွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များအတွက်လိုအပ်သမျှရ။
အသစ်သောမိဘများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုမွေးကင်းစကလေးငယ်ကို tracker နှင့်အတူမှတ်တိုင် Log ။ မှတ်တမ်းနို့တိုက်ကျွေးမှု, သင့်ကလေးရဲ့အိပ်စက်ခြင်းအချိန်ဇယားကိုခြေရာခံ - သင်ပင်နို့တိုက် tracker အဖြစ် Glow ကလေးကိုသုံးနိုင်သည်! ကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့အိပ်စက်မှုအချိန်ဇယားနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောမိဘအုပ်ထိန်းအကြံပေးချက်များအကြောင်းကိုလက်လှမ်းမီနှင့်ရှယ်ယာအကြံပေးချက်များသည်သင်တို့အထဲ၌ log အခါတိုင်း။
Plus အားကျွန်ုပ်တို့၏ကလေး tracker ကြောင့်သင်သည်သင်၏အဖိုးတန်မွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုသို့မဟုတ်ကလေးငယ်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနေချိန်မှာလှပသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူသင့်မိသားစုအယ်လ်ဘမ်တည်ဆောက်ခြင်းစတင်နိုင်ပါသည်ဆိုလိုတယ်သုံးစွဲဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်။
မှတ်တမ်းနှင့်ပိုပြီးအစာကျွေးတစ်ဦးကမြစ်ရေတင်စီမံကိန်း tracker,!3နည်းလမ်းတွေကလေးသင်သည်သင်၏ကလေးသို့မဟုတ်ကလေးငယ်ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ log ကူညီပေးသည် Glow:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်မားနှင့်သတိပေးမှုဆိုင်ရာအသိပေးချက်များနှင့်သင်၏ကလေး၏နှီးသောအပြောင်းအလဲအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်ဇယားနှင့်ထို့ထက် ပို. ခြေရာခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တိုင်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးသင်သည်သင်၏ကလေး၏နို့တိုက်ကျွေးရေးမှတ်တမ်းရန်သင့်သူနာပြု timer ကနေအရာရာကိုခြေရာခံပေါ်မှာနေဖို့ပေးနိုင်ပါတယ်
ပြီးပြည့်စုံသောသင့်ရဲ့ကလေးရဲ့အိပ်စက်ခြင်းအချိန်ဇယား၏ PDF ကိုအနှစ်ချုပ်များ, နို့တိုက်ကျွေးရေးမှတ်တမ်း, အပြန်အလှန်တိုးတက်မှုနှုန်းဇယားပေါင်းပိုပြီးရယူပါ!
ဒါကခြားနားချက်နှင့်အတူ logging မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကလေးငယ်ကို tracker, သူနာပြု timer, နို့တိုက် tracker နှင့်ပိုပြီး!
မွေးကင်းစကလေးငယ်ရဲ့သော့ချက်မှတ်တိုင်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး features တွေတောက်:
•မှတ်တိုင်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလွယ်ကူပါတယ်လုပ် - ဤ tracker, သူနာပြု timer နေရာမှာနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးမှတ်တမ်းချပေးတစ်နို့တိုက် tracker ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နှီးအပြောင်းအလဲများကနေပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းနှင့်ပိုပြီးဖို့အရာရာကိုထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်!
•ပိတ်-ဖှဲ့အသိုင်းအဝိုင်း - သင့်ကလေးသို့မဟုတ်ကလေးငယ်ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်အခြားမိဘအုပ်ထိန်းအကြံပေးချက်များဆွေးနွေးရန်သည်အခြားသစ်ကိုမိဘများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ တောင်မှသင့်မိသားစုအယ်လ်ဘမ်မှသင်၏အဖိုးတန်ကလေးဓာတ်ပုံများ share!
•သင့်မိသားစုအချိန်လေး Capture - သင့်ကိုယ်ပိုင်အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာကလေးဓာတ်ပုံများ Upload လုပ်ပါမှတ်စုများကို ယူ. သူတို့အအဖိုးတန်သမိုင်းမှတ်တိုင်များမှတ်တမ်းတင်။ Plus အား, သင်တောင်မှသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူကလေးဓာတ်ပုံများ share နိုငျပါသညျ!
တစ်ဦးကမွေးကင်းစကလေး tracker •သင်ယုံကြည်နိုင် - CDC အားဖြင့်ဒဏ်ခတ်အရေးယူသင့်ရဲ့ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းမှတ်တိုင်များ Follow နှင့်ခြေရာခံ
•နေ့စဉ်ဆောင်းပါးများ၏စာကြည့်တိုက် - Read မျှဝေနောက်ဆုံးပေါ်မိဘအုပ်ထိန်းအကြံပေးချက်များနှင့်ကလေး 411 ™ကနေအခြားအကြောင်းအရာများကို။
•သင့်ကလေး၏သမိုင်းမှတ်တိုင်များအကြောင်းကိုထောက်ခံမှုနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းအကြံပေးချက်များကိုရယူပါ။ Plus အား, သင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြွ Glow ကလေးအသိုက်အဝန်းအတွက်သင့်မိသားစုအယ်လ်ဘမ်မှကလေးဓာတ်ပုံများမျှဝေနိုင်ပါသည်
glow ကလေးဟာကလေး 411 ™နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပြီး - အသစ်သောမိဘများများအတွက်ကျော်ကြားတဲ့စာအုပ် - သင်ကလေးနှင့်ကလေးငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေကို & မတ်အကြံဉာဏ်ကိုပေးနေ့စဉ်ဆောင်းပါးများပေးရ။
ပွား - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glow.android.nurture
ဧဝက - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glow.android.eve
ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - support@glowing.com
Web ကို - http://www.glowing.com
Facebook မှာ - http://www.facebook.com/glow
Instagram ကို - @glowbabyapp
တွစ်တာ - @GlowHQ
glow အစဉ်အဆက်တစ် Webby ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရဖို့အတွက်သာကျန်းမာရေး & Fitness App ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့အသစ်သောမိဘများအတူတူပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နဲ့ high-tech အတွေ့အကြုံကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။
Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones အား အခ်က္ျပပါ
cramik စတိုး 10 16.29k
Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Glow Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://glowing.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 6A:D1:5E:D3:AD:B7:B3:E7:F3:D4:14:06:81:7D:8C:5A:68:7F:DC:87
အဖွဲ့အစည်း (O): Glow Inc
Glow Baby: Track Newborn Baby & Toddler Milestones APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ